कतिवटा दल उपयुक्त ? - विचार/विश्‍लेषण - कान्तिपुर समाचार
- डम्बर खतिवडा
दुईदलीय प्रणालीको सबैभन्दा खराब पक्ष के हो भने त्यसले मतदाताको छनोटको अधिकारलाई संकुचन गर्छ ।
कार्तिक २७, २०७४-नयाँ संविधानमा ‘थ्रेसहोल्ड’को व्यवस्था र चुनावी गठबन्धनको तीव्रतासँंगै दलीय ‘स्पेस’ र संख्याको बहस सघन हुनथालेको प्रतीत हुन्छ । विगतका दुबै संविधानसभा निर्वाचनमा दलहरूको संख्या अस्वाभाविक ढंगले धेरै थियो । यति धेरै दल किन र केका लागि ? पेसेवर राजनीति गर्नेहरूको रहर, महत्त्वाकांक्षा वा बाध्यताको लागि जस्तोमात्र देखिएका धेरै दलको औचित्य र सान्दर्भिकता व्यवहारमा पुष्टि भइरहेको थिएन । एउटै विचार, एजेन्डा र स्पेसमा अनेकन दलले जनमतलाई विभाजित मात्र गर्छ । विभाजित जनमतले शक्ति निर्माण गर्न सक्दैनथ्यो । तसर्थ एउटै वैचारिक धारका दलहरू मर्ज हुन, दलहरूको संख्या घट्न र गुणस्तरीय दलहरूबीच प्रतिस्पर्धा हुन आवश्यक थियो ।
रुपान्तरण र वामपन्थीको घोषणापत्र ›